Shiinaha 3D Embossed UV Resistance Composite WPC Decking saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Lihua
Shayga No: 3DLS146H23B
Qiimo: $ 2.57 / M
Midab: Shaah, bunni, shukulaato, kedar, dhuxul, iwm
Waqtiga hogaaminta: 10-22 MAALMOOD
2.4m, 2.9m, 3.6m, ama loo habeeyay
Beerta, Muuqaalka, Baarkinka Biyaha
● Qurxinta WPC waxyaabaha ugu muhiimsan waa PE, fiilooyinka alwaaxda iyo waxyaabaha lagu daro Qurxinta WPC ayaa caan ka ah adduunka oo dhan sida aan u isticmaalno maaddada dabiiciga.
Qalabkeena WPC waa qurux iyo xarrago dabiiciyan alwaax dabiici ah, taabashada si fudud loo rakibo, sidaa awgeed waxay la kulmi kartaa shuruudaha kala duwan ee macaamiisha.Waxaa la xiirayaa, la qodbi karaa, la qali karaa oo la jari karaa si ay ugu haboonaato qalabyada qeexitaano kala duwan, sida muuqaalka, jardiinada banaanka, baarkinka, supermarket, iwm.
Cking Qurxintayada 'WPC' waa mid ku habboon deegaanka, oo aan dib loo cusbooneysiin karin isla markaana aan lahayn kiimiko kale oo qatar ah, uma baahna rinjiyeyn, koolo la'aan iyo dayactir hooseeya.
De Decking-keena wuxuu leeyahay awood cimilo wanaagsan, wuxuu ku haboonaan karaa laga bilaabo -40 ℃ ilaa + 60 ℃ .Dhirkeenna WPC waxaa loo isticmaali karaa adduunka oo dhan.Bodahay guddiyadayadu waa kuwo u adkaysta cimilada, siibasho ka hortagga, dildilaacyo yar yar, xoqan, kabo saaxiibtinimo leh Ku darista UV .Plus waxay ka dhigeysaa looxyada UV iska caabbinta, libdhiska adkeysiga iyo adkeysiga cabirka wanaagsan ee ka dhanka ah qoyaanka iyo heerkulka.
Hore: Bannaanka No Crack & Warp Wood Caaga WPC Decking
Xiga: Qurxinta Alwaaxda WPC qurxinta ee dibedda
S: Waa maxay heerka alaab-qeybiyeyaasha shirkaddaadu?
J: Dhammaantood waa inay iswaafajiyaan istaagida shuruudda warshaddeenna, sida ISO, deegaanka u habboon, tayo sare leh, iwm.
S: Mudo intee le'eg ayaa caaryadaadu si caadi ah u shaqeysaa? Sidee loo ilaaliyaa maalin kasta? Maxay tahay awoodda nooc kasta oo dhimanaya?
Farsamayaqaanku wuxuu diyaariyaa caanaha wuxuuna sameeyaa muunad si loo xaqiijiyo midabka iyo daaweynta macaamiisha ka dib
Kadib samee granulation (Diyaarso walxaha), ka dibna wuxuu bilaabi doonaa wax soo saar, alaabooyinka soo-saarka ayaa lagu ridi doonaa goobta gaarka ah, goor dambe ayaan sameyn doonaa daaweynta ka dib, ka dibna waxaan xirxiraa kuwan.
S: Muddo intee le'eg ayay tahay waqtiga dhalmada ee alaabtaadu?
S: Ma haysaa tirada ugu yar ee dalab ah? Hadday sidaas tahay, waa maxay tirada ugu yar ee dalabku?
S: Waa maxay soosaarka alaabtaadu? Sidee lagu gaadhay?
S: Muddo intee le'eg ayuu shaqeynayaa inta soo hartay ee alaabooyinka WPC?
S: Muddo intee le'eg ayaad bixin doontaa?
S: Markaad isbarbar dhigto qoryaha, waa maxay faa'iidada ay leedahay wax soo saarka WPC?
S: Waxyaabaha WPC ma u baahan yihiin rinjiyeyn? Midabkee ayaad bixin kartaa?
J: Farqiga u dhexeeya alwaaxda, waxyaabaha WPC laftoodu iyagu midab leeyihiin, waxay u baahan yihiin rinjiyeyn dheeri ah. Guud ahaan, waxaan bixinnaa 8 midab oo waaweyn sida kedar, jaalle, geed casaan, qoryo casaan, bunni, kafee, cawl khafiif ah, cawl buluug ah. Iyo sidoo kale, waxaan ka dhigi karnaa midab gaar ah dalabkaaga.
Iskuxidhka iskudhafka WPC
Dharka Super Embossed
UV iska caabin ah WPC decking
3D Caqli-galinta Xeel Dheer WPC-ga WPC ...
3D Wood Deep Grain Embossed Wood Isku-darka Soli ...
Bannaanka Deep embossed UV caag WP
Bannaanka ka-hortagga-Xakamaynta Bannaanka Dheer ee Isku-dhafan ...
alwaax decking isku dhafan, Qurxinta WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, Bannaanka WPC decking, Gogosha WPC, Dabaqa WPC,